Dhagayso Madaxweyne Gaas: Macalimiinta qalin jabisay dowladda ayaa shaqo siinaysa sanadka dambe – Radio Daljir
Luulyo 25, 2016 7:06 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 25-July-2016 magaalada Garoowe kaga qayb galay munaasabad lagu maamuusayey in ka badan saddex boqol oo macallin oo ka qalin jebiyey kulliyadda tababarka Macillimiinta ee GTEC.
Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiirka Wax-barashada Puntland, Wasiir ku-xigeenka waxbarashada, xildhibaano, hormuudka kulliyadda GTEC, Abwaano iyo Qoraayo Soomaaliyeed, hay’adda cilmi baarista SIDRA, macallimiinta wax ka dhiga kulliyadda GTEC, waalidiin, macallimiintii ka qalin jebiyey kulliyadda iyo marti sharaf tiro badan.
Kulliyaddaan ayaa sannad walba soo saarta Macallimiin tiro badan oo ka hawl gala dhammaan gobollada Puntland iyo Soomaaliya, kuwaas oo is beddel mug leh ku sameeya tayada ardayda wax kabarata goobaha waxbarasho ee kala duwan ee gobollada dalka.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo munaasabadda qalin jebinta khudbad ka jeediyey ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Maamulka, Macallimiinta, hay’adaha caawiya kulliyadda GTEC iyo macallimiinta ka qalinjebiyey kulliyadda tababarka Macallimiinta ee GTEC.
Madaxweynaha ayaa xusay in macallinnimadu ay tahay shaqada ugu wanaagsan ee uu qof banii’aadam ahi ka shaqeeyo isla markaana waxaa uu tilmaamay Madaxweynuhu in loo baahan yahay in lasii dar-dargeliyo dedaalka loogu jiro sidii loo soo saari lahaa macallimiin tayo leh oo ka hawl gala Puntland, si ay bulshada reer Puntland uga haqab beesho baahida macallimiinta ee ka jirta.
Dhagayso Abwaan Shube oo ka warbixiyay Taariikhdii Marxuun Abwaan Cabdulqaadir Cali Cigaal